» कुखुरा पहिला जन्मियो कि अन्डा ? क्वान्टम फिजिक्सले दियो जवाफ
२९ भाद्र २०७६, आईतवार ०६:०७
पहिला अन्डा आयो कि कुखुरा ? यस विषयमा प्राचीन समयदेखि नै बहस सुरु भएको थियो, तर पनि यसमा कसैको एकमत भने थिएन । सदियौँदेखि यस सवालले वैज्ञानिक तथा दर्शनशास्त्रीहरूको दिमाग घुमाइरहेको थियो ।
कुखुरा नै थिएन भने अन्डा कहाँबाट आयो रु यदि कुखुरा पहिला आएको भए अन्डाविना कसरी जन्मियो त ?
तपाईं दिमाग घुमाउन थाल्नुहुन्छ, सोच्न र तर्क गर्न थाल्नुहुन्छ, तर पनि तपाईलाई यस सवालको जवाफ मिल्न सक्दैन । तर, अब अस्ट्रेलियाको क्विसल्यान्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिक तथा फ्रान्सको एनइईएल संस्थाले यस सवालको सत्य–तथ्य पत्ता लगाएको दाबी गरेको छ । क्वान्टम फिजिक्सका अनुसार अन्डा तथा कुखुरा दुवै पहिला आएका थिए ।
यो अनुसन्धानमूलक लेख सोसाइटी अफ अमेरिकन फिजिक्स म्यागजिन फिजिकल रिभ्यु, जर्नल–अमेरिकन फिजिकल सोसाइटीमा प्रकाशित भएको थियो । एजेन्सीको सहयोगमा